Alshabaab oo weerar cusub ka geystay Xeebta Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo weerar cusub ka geystay Xeebta Kenya
Mareeg.com: Alshabaab ayaa xalay weerar ku qaaday bas dad qaada, kaasoo ay la socdeen askar iyo shacab, waxaana soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan tirada dhimashada.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtey masuuliyadda weerarkan oo ka dhacay xuduuda Kenya la wadaagto Soomaaliya kaas oo lagu diley ugu yaraan 6 qof.
Wakaaladda Wararka ee AFP ayaa ku soo warameysa in afhayeenka ciidamada al-Shabaab ninka la yiraahdo Cabdicasiis Abu-muscab uu khadka telefonka ugu sheegay in hawgal ay ka fuliyeen gudaha Kenya ay ku dileen saraakiil ka tirsan Kenya, Afhayeenka ayaa sheegay in sheegashada Kenya ee ah in ay sugeen amaanka xuduudaha ay tahay mid been ah.
Hay’adda Laanqeyrta Cas ayaa sheegtay in weerar lagu qaadey gaari nooca dadka qaada ee loo yaqaan Bas kaas oo maraayey degmada Witu ee ku dhaw Lamu ay ku dhinteen 7 qof oo 4 kamid ah ay ahaayeen Boolis.
Tirada dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa lagu sheegay ilaa 8 qof oo isugu jira boolis iyo shacab.
Sideedda ruux ee dhaawcmay ayaa waxaa ku jira afar askari oo ka tirsan ciidanka booliiska Kenya, kuwasoo gurmad ahaan u aaday goob la sheegay in kooxaha hubeysan ay ku haysteen gaariga rakaabka siday oo ku socday magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
Taliyaha booliiska Jasiiradda Lamu, Miiri Njenga ayaa sheegay in gaariga ay is-taajiyeen kooxo hubeysan, kuwaasoo isku dayay inay afduubaan dadkii gaariga la socday, balse ay ciidamada booliisku weerareen goobtaas markii ay ka war-heleen.
Sida laga soo xiganayo Booliska Kenya niman hubeysan ayaa rasaas ku furey bus ka yimid Mombasa kuna jeedey xeebta Lamu, kadib waxay beegsadeen gaari Boolis kaas oo u istaagey markii buska la weeraray.
“Ciidnka booliiska iyo kooxihii hubeysnaa waxaa dhexmaray iska-horimaad kooban, waxaana dhankeenna ka dhintay laba askari, afar kalena dhaawac ayaa soo gaaray, kooxihii hubeysnaana waxaa u suuro-gashay inay markiiba baxsadaan,” ayuu yiri Njenga oo warbaahinta la hadlayay saakay oo Sabti ah.
Mr, Njenga ayaa hadalkiisa ku daray in xoogagga hubeysan oo aanu sheegi karrin ay u baxsadeen deegaanno howd ah oo ku yaalla xeebta dalka Kenya ayna wadaan baaritaanno ay ku doonayaan inay kusoo helaan.
Booliska ayaa diidey in ay wax faahfaahin ah ka bixiyaan warar sheegaya in la afduubtey qaar kamid ah dadkii baska saarnaa.
Lamu ayaa horey ururka al-Shabaab ay weeraro uga fuliyeen bartamihii bishii June kaas oo ay ku dhinteen isku dar dad gaaraya 87 qof.
Askarigii labaad oo muddo 3 todobaad ah Muqdisho ku dilay xaaskiisa
Dhuxulow oo ka warbixiyey howlaha xukuumadda Soomaaliya